Ny fitsipiky ny ampahatelony: ny zavatra tsy maintsy fantatrao hahafehy azy | Famoronana an-tserasera
Tsy tokony hafangaro amin'ny fitsipiky ny ampahatelony izany ho an'ny zavatra mifandraika amin'ny tontolon'ny fisitrika, ary io teny io ihany, fa mifantoka amin'ny fikambanana miaramila. Eto handeha amin'ny teboka afovoan'ity bilaogy ity izahay, mifandraika amin'ny famolavolana sy izay rehetra misy ifandraisany amin'ny tontolon'ny zavakanto amin'ny sakany rehetra; izahay aza dia milalao amin'ny fiteny fandaharana, programa ary fomba samihafa hanomezana antsika ny maha izy azy bebe kokoa amin'ny maha-mpamorona.
Ny fitsipiky ny ampahatelony sahala amin'ny nihaonantsika andro vitsivitsy lasa izay niaraka tamin'ny Golden Ratio ary ny fampiasana ny refy fandrefesana hahitana ny tahan'ny "tsara" indrindra ho an'ny mason'ny mpijery dia a torolàlana izay mihatra amin'ny dingan'ny fananganana sary hita maso, toy ny volavola, sarimihetsika, sary hosodoko ary sary. Amin'izany no ahafahantsika manana fototra hametrahana ireo singa samihafa mba hametrahana azy ireo am-pahendrena amin'ireo tsipika ireo sy ny fihaonan'izy ireo.
1 Ny fitsipiky ny ampahatelony
2 Andininy sasany tokony ho raisina rehefa manoratra
3 Inona ny tantaran'ny fitsipiky ny fahatelo?
4 Mampihatra fifehezana ny fampiharana
5 Ny fitsipiky ny ampahatelon'ny sary
Ny fitsipiky ny ampahatelony
Izay miaro ity fitsipiky ny ampahatelony ity dia matetika no manondro azy a fomba tsara hampifanarahana lohahevitra amin'ireo teboka afaka mamorona fihenjanana bebe kokoa, angovo sy fahalianana amin'ny famoronana fa tsy ny fampifantohana ny fifantohana amin'ilay lohahevitra.
Una Ny sary dia ohatra tsara indrindra hanehoana haingana ny fiandohan'ity lalàna ity. Manana filentehan'ny masoandro amin'ny sary isika miaraka amin'ny hazo iray izay ho foto-kevitry ny sary, saingy avela eo ankavanany kely hahatratrarana firindrana firindrana lehibe kokoa, toy ny hoe eo afovoan'ny fakana azy io.
El ny faravodilanitra dia mipetraka amin'ny tsipika marindrano manasaraka ny fahatelo ambany ny sary avy amin'ny tapany roa ambony. Ny hazo dia mifototra amin'ny fahalianan'ny tsipika roa, izay azo antsoina hoe teboka mahaliana ny sary. Na dia tsy maintsy lazaina aza fa io teboka io dia tsy tokony hikasika ireo andalana ireo hanararaotra ny fitsipiky ny ampahatelony.
Ny antsipiriany iray hafa dia ny faritra mamirapiratra indrindra amin'ny lanitra akaikin'ny faravodilanitra, izay saika hilentika ny masoandro, fa dia tsy mandeha mivantana amin'ny iray amin'ireo tsipika ireo, na dia eo akaikin'ny fihaonan-dalana aza izy io roa amin'ireo tsipika, ampy hahafahantsika miresaka momba an'io fitsipika io sy hahatakatra azy tsara amin'ny masony.
Azontsika atao ny milaza fa io lalàna io miantoka fa mahatakatra fomba tsara kokoa hamoronana sary hita maso izahay. Raha tokony hifantoka amin'ilay lohahevitra ianao dia apetraho kely izany, mba handray andraikitra kely ny ambiny amin'ireo singa ary afaka mirindra amin'ny fomba izay ahazoana ny fahamendrehana bebe kokoa ny fisamborana na ny famolavolana. Ny saripika an-tanety panoramic dia ohatra tsara indrindra amin'izany raha mampiasa ny fitsipika ny ampahatelony isika.
Mila mijery ny ankamaroan'ny fampiharana fakan-tsarimihetsika finday fotsiny ianao, vao ho tonga saina fa isika avelao hametraka ny takelaka telo ampahatelony mba hanana mpitari-dalana hanamorana ny zavatra ho antsika rehefa maka sary.
Andininy sasany tokony ho raisina rehefa manoratra
Ny hevi-dehibe iray hafa dia ampifanaraho amin'ny tsipika fitarihana sy amin'ny teboka fihaonan'izy ireo ny lohahevitra, handao ny faravodilanitra eo an-tampony na eo amin'ny tsipika farany. Avelantsika ho an'ny lanitra ny roa ampahatelony, na ny ampahatelony ho an'ny lanitra rehefa manoratra sary malalaky ny velaran-tany izahay.
Ny antony lehibe mahatonga ny fitsipiky ny ampahatelony dia esory eo afovoany ny lohahevitra, na sorohy ny fizarazarana mba tsy hizara roa ny sary. Raha ao an-tsaina izany dia afaka manatsara haingana ity fitsipika ity isika ary mampihatra izany amin'ny asa tsy misy farany ho an'ny zavatra rehetra amin'ny famolavolana, kanto, sary ary maro hafa. Ary koa, amin'ny fitadidiana an'ity fitsipika ity ao an-tsaina, afaka mijery ireo sary an-tsarimihetsika amin'ny sarimihetsika marobe izay mandray ny ampahatelony amin'ny fomba hafa isika.
Raha sendra maka sary olona iray isika, ny zavatra mahazatra dia ny mampifanaraka ny tapany ambony amin'ny vatana amin'ny tsipika mitsangana ary ny mason'ilay olona mankany amin'ny tsipika mitsivalana.
Inona ny tantaran'ny fitsipiky ny fahatelo?
antsika tsy maintsy mandeha any amin'ny 1797 isika mba hihaona amin'i John Thomas Smith. Ao amin'ny bokiny "Remarks on the ambanivohitra Scenery", ity lehilahy ity dia mitanisa ny sanganasan'i Sir Joshua Reynolds, izay miresaka momba ny teny vaovao mifandraika amin'ny hazavana maizina amin'ny sary hosodoko. Eto i Smith dia manomboka amin'ny hevitra momba ny fitsipiky ny ampahatelony ka ankehitriny dia mahazatra amin'ny karazana asa maro.
Afaka nifindra tamin'ny filôzôfia isika tamin'ny alàlan'ireo teny notenenin'i Reynolds izay miresaka jiro roa samy hafa sy mitovy tsy tokony hiseho amin'ny sary mitovy aminy. Ny tokony atao dia ny lehibe sy ny ambiny "manamboninahitra", na amin'ny lafiny na amin'ny ambaratonga. Ny ampahany tsy mitovy sy ny diplaomany dia mitarika ny sain'ny olona ho amin'ny ampahany mora foana, fa ny ampahany mitovy endrika aminy kosa dia mihantona amin'ny fomba hafahafa.
Hevitra vitsivitsy izay nanomboka nahatakatra ny fitsipiky ny ampahatelony izy ireo ary nampiasaina tamim-pahagagana nataon'ny mpanakanto maro. Hevitra fototra ho an'ny kanto ary iray izay tsy maintsy omena tsy misy fiheverana mba ahazoana dikany hafa ny asantsika, fa tsy mankany amin'ny kisendrasendra na ny famoronana mety hipoitra avy amin'ny kantontsika.
Mampihatra fifehezana ny fampiharana
Manaraka an'io fototra io amin'ny fitsipiky ny ampahatelony isika dia afaka mahazaka azy mora foana amin'ny andavanandrontsika mba hahatsapa fa ireo sary izay raisintsika dia manomboka manitatra dikany izy ireo ary afaka mampirona tena haneho ny firindrana mety misy eo amin'ilay sehatra raisintsika. Hatsangantsika tsikelikely izy io nefa tsy ho tsapantsika akory fa mampiasa an'io fitsipika io amin'ny ankamaroan'ny sanganasa isika, indrindra rehefa te avelantsika any ambadika ilay lohahevitra ary avelao ireo singa hafa afaka hanome azy dikany bebe kokoa.
Toa hadalana ihany amin'ny voalohany, fa rehefa ela ny ela dia ho fantatsika tsara kokoa ny fotony filozofika sy ny firindrana misy ao amin'ity fitsipika ity. Azontsika atao koa ny mahatakatra fa ny lalàna dia natao mba hofoanana, saingy na izany aza, ny tena marina dia misy mpanakanto marobe mampiseho antsika amin'ny kantony fa tsy izany no izy. Azontsika atao foana ny manome ny fahalalahantsika hamorona an-kalalahana, saingy ireo andalana ireo dia afaka manampy antsika amin'ny fotoana sasany hahitana topy maso an'izay hevitra ilaintsika amin'ny famoronana farany. Izy ireo dia fitaovana, amin'ny faran'ny andro, ananantsika eo am-pelatanantsika hahafahantsika mamaha ny karazana olana rehetra, ary, ambonin'izany rehetra izany, rehefa tsy manampy antsika ny zavakanton'ny kanto indrindra.
Ny fitsipiky ny ampahatelon'ny sary
Noho ny fahefana lehibe an-tananay miaraka amin'ny ankamaroan'ny finday avo lenta izay mivondrona eny an-tsena, ity fitsipika ifotony ity dia mijoro ho lehibe indrindra amin'ny fakana sary tsara tarehy. Ao amin'ny sary panoramika dia mahazatra ny mametraka ny faravodilanitra eo afovoan'ny famoronana, araka ny efa nolazainay teo aloha tamin'ny hadisoana ataon'ny maro. Ny tokony hataonao dia apetraho eo amin'ny iray amin'ireo tsipika roa mitsivalana ny faravodilanitra. Lafiny iray hafa tokony ho raisina ny fampidirana zavatra izay afaka miakatra eo afovoan'ny sary. Mety ho hazo eo amboniny hametraka azy amin'ny fitsipiky ny ampahatelony.
Efa nilaza an'izany izahay ny olona dia tsy maintsy apetraka ivelan'ny iray amin'ireo sisin'ny frame. Manokatra io habaka malalaka io ary mampiseho ny tontolon'ny lohahevitra, izay mahatonga ny sary ho tsara tarehy bebe kokoa raha haintsika ny mampihatra tsara an'io fitsipika io. Amin'ny sary, dia ny tsipika marindrano amin'ny mason'ilay olona aseho izay tokony hapetraka amin'ny iray amin'ireo tsipika roa an'ny mpanapaka.
Fetsy iray hafa ho an'ny fakana sary ny raha mijery zavatra lava elongated isika izay afaka mizara roa ny sary dia tsara kokoa izany afindrao kely mankamin'ny iray amin'ireo sisiny ireo mba tsy hanitsahany ny tsipika rehetra mitsangana ary avelao, indray mandeha indray, io habaka malalaka io izay manao "fofonaina" ny sary.
Amin'ny sary misy lohahevitra mihetsika, mila mijery akaiky ny toerana fiveloman'izy ireo ianao, handao io habaka malalaka io izay afaka manoritra ny lalana izay horaisiny mifanaraka amin'izay ary tsy misy tampoka.
Ary mandrakariva, hanana amin'ny programa fanovana izahay ny fahaizana mamboly ny sary hihaona amin'ny fitsipiky ny ampahatelony tsy misy olana lehibe. Ny sasany amin'ireo programa malaza indrindra, toa ny Adobe Photoshop sy Lightroom, dia manana fitaovana cropping ilaina hametrahana tsara ny lohahevitra mifototra amin'ny zavatra voalaza rehetra etsy ambony ary hita taratra tsara izany fotodrafitrasa izany.
Aza hadino fa io lalàna io dia mihatra amin'ny toe-javatra rehetra, na dia ny fandikana azy io amin'ny fahendrena sy ny famoronana aza miteraka sary fihantsiana manome fahatsapana hafa hafa noho ny mety ho izy ireo raha mampiasa ny fitsipiky ny ampahatelony isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Fitsipiky ny fahatelo
Fjan dia hoy izy:
Isaky ny mahita lahatsoratra mahaliana momba ny firafitra, toa an'ity iray ity aho, tsy mahomby amiko ny ohatra ... Izay mitarika ahy hanontany tena raha fantatrao ny fitsipika hazavainao ...
Lahatsoratra tsara! Tsy dia be loatra ireo ohatra!
Valiny tamin'i Fjan